QuizClash ™ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » QuizClash ™
QuizClash ™ APK ကို
ကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ join နှင့်နေ့စဉ် toplists ကိုတက် - ထို besserquizzer သူကားအဘယ်သူ !?
နှင့်အံ့သြဖွယ်အသစ်များကိုအချက်အလက်များသင်ယူ - QuizDuel သငျသညျအသေးအဖွဲ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အခြားကျပန်း quizzers စိန်ခေါ်နိုင်မည့်တစ်ဦး, အသိဉာဏ်ရောင်စုံနဲ့ပျော်စရာလူမှုရေးပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
•စိတ်လှုပ်ရှား DUELS: စိတ်လှုပ်ရှားစရာခေါင်းကို-to-ခေါင်းကိုဂိမ်းရန်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်ကျပန်းကစားသမားကိုစိန်ခေါ်မယ်နှင့် 19 အမျိုးအစား၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက် outsmart ။
•လစဉ်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ: သင်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပါသလား ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်တွေနဲ့ Play နှင့်သင်ကအခြားကစားသမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခွအေကိုဘယ်လိုကြည့်ပါ!
•အထူးဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ: အကြောင်းအရာ wizards ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့ကရေးစပ်ရေးရာဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။
• BLITZQUIZ: သင်အစာရှောင်ခြင်းလျှပ်စီးရှိပါသလား ထိုအခါအသစ်ကအမျိုးအစားနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ BlitzQuiz နေ့တိုင်းလက်ဖက်ရည်သင့်ရဲ့ခွက်ကိုဖြစ်လိမ့်မည်! အဆိုပါ toplist တက်နှင့်သင့်တုံ့ပြန်မှုကိုချွတ်ပြပါ။
•ပုဂ္ဂိုလ်ရေး: ထုံးစံကိုယ်စားပြုပုံနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် Express!
•ဘာသာပေါင်းစုံ: သင်တစ်ဦးတတ်တဲ့င်? အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျရရှိပါသည်။ သငျသညျ, ဂျာမန်အပါအဝင် 15 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်အီတလီ, ဆှီဒငျ, ရုရှ, ပိုလနျနှင့်များစွာသောပိုပြီးပြင်သစ် QuizDuel play နိုငျပါသညျ!
ကြီး QuizDuel မိသားစု join နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာ:
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/QuizDuelGame/
81.77 ကို MB